XOG RASMI AH: Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo go`aamisay qaab ay Shahaadooda ku heli karaan ardayda Puntland.
September 4, 2019 NEWS 3
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes oo dabagal ku hayey wararka ku saabsan in Ardayda Puntland ay heliwaayeen Shahaadada wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliya ayaa helay xog ka soo gaartay wasaaradda waxbarashada Federaalka, taas oo ah go`aan ay wadajir u gaareen madaxda wasaaraddaas oo uu hogaaminayo Wasiirka waxbarashadu Cabdullaahi Goodax Barre.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre go`aamiyey in dhammaan Ardayda Puntland qofkii u baahan Shahaado uu soo marayo nidaamka ay soo maraan Ardayda Somaliland ee qaata Shahaadada.
Nidaamka Ardayda Somaliland ay u maraan helitaanka Shahaadada ayaa ah mid arday kasta si iskiis ah u doonto Shahaadada oo uu sidaas ku helayo, isagoo wata cadeymaha galitaanka iyo Natiijadii Imtixaankii maamulka uu ku soo galay.
Wasiirka Waxbarashada ayaa go`aamiyey in aan gabi ahaanba wax xariir ah dhexmari doonin wasaaraddiisa iyo Wasaaradda Waxbarashada Puntland, isagoo si cad ugu sheegay madaxa Imtixaanaadka Federaalka iyo Shahaadada in sidaas uun lagula macaamilo Ardayda.
Mid kamid ah Agaasimayaasha wasaaradda ee xagga bixinta Shahaadooyinka ayaa u sheegay Warsidaha Puntlandtimes, in laga bilaabo maanta ay Ardayda Puntland heli karaan shahaadada, balse ay ku xiran yihiin sharuudo kooban oo ku wajahan si lamid ah Somaliland.
Talaabada uu qaaday qaatay Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa ka dambeysay markii ay fashilmeen wada hadalo u socday labada dhinac ee Puntland iyo Federaalka, loogana wada hadlayay arrimaha waxbarashada iyo Imtixanaadka.
Puntland, waxay aqbashay in ay sannadka dambe Ardaydu galaan Imtixaan ay wadajir u diyaariyaan dawladda Faderaalka iyo Puntland, laakiin talaabadaas waxaa diiday dhanka Federaalka, waxayna ku adkeysteen in ay Imtixaanka Soomaaliya la gasho Puntland.
Hanaanka cusub ee wasiirka Waxbarashada ayaa dhaawac ku ah hanaanka Federaalka ee ay kushaqeyso kuna dhisan tahay dawladda Faderaalka, sidaas oo kale Puntland ayay ku tahay wajigabax in Ardaydii ay Shahaadooyinka u doontaan magaalada Muqdisho, iyadoo horey u balan-qaaday in ay heli doonaan.
Reer Puntland waa dad dhiban oo aan garanayn halka laga haayo Waa dad caba biyo aan nadiif ahayn oo xareeda waraabaha ku soo kaadiyaya. Skuul waxaa dhigankara kii awooda canugii waxaa laga qaadaa 12 doolar Waxay u sacbiyaan oo raali ka yihiin Hogaamiye ama Madaxweyne riyooday oo ay qabiil ku doorteen kaasoo u yimi inuu wax dhaco oo guryo dibada ka dhisto. Cidwalba Marqaati bey ka tahay kii ka horyimaadana dagaal bey ka xigaan. Madaxweynaha iyo Baarlamaanka waxay u yimaadeen inay waxa dadka loogu soo dhiibo qaybsadaan.
Nacaskaanafka weyn ee meeshaan wax ku qorey, halka uu ka yimi baa caruurta kolkii biyuhu yaraadaa, istinjada biyaha ah la siiyaa, waa Cadowga afmaalka ah ahee Puntland, waana been waxa afkiisa ka baxayaa, war xishood.